Olee otú mbubata M4V Iji iMovie?
A ọtụtụ ugboro ya na-eme ka ndị mmadụ mkpa iji a kpọmkwem video usoro. Ngwaọrụ gị ghara nkwado niile formats na dị otú ahụ ikpe, ị pụrụ ịhụ mkpa iji tọghata site na otu usoro ọzọ. Ezie na e nwere ọtụtụ video converters dị; anyị ga-akwado na iji Wondershare video Ntụgharị kacha n'ihi na nke flurry atụmatụ nke ọ nwere na-enye.
Wondershare Video Ntụgharị kacha - na isi atụmatụ
Ọ bụ otu n'ime ndị na-ewu ewu software nke na-abịa na a dị ọcha, mma n'anya na mfe iji interface. Nke a software a na otú e mere ya na ọ nwere ike mfe tọghata video faịlụ site na otu usoro ọzọ. Ebe a bụ ụfọdụ n'ime ndị isi atụmatụ nke ọ nwere na-enye.
• The Ntụgharị akwado dị ọtụtụ dị ka 159 dị iche iche formats na ọhụrụ formats na-kwukwara nọgidere.
• tọghata video 30 x ngwa ngwa.
• Ọ na-akwado ndị na-4k video format dị ka mma.
• Ị nwere ike tọghata 2D videos ka 3D nakwa na na kwa na ịtụnanya ọsọ.
• cropping nke faịlụ
• agbanwe ìhè, iche, saturation
• Tinye watermarks mgbe ọ dị mkpa
• jikota dị iche iche faịlụ ọnụ-eme ka otu mejupụtara video
• Tinye ndepụta okwu maka mma nghọta
• De-interlacing na pụrụ iche utịp awa
• Ị nwere ike ịgbanwe akụkụ ruru nakwa
• Download YouTube video na ndị ọzọ na video si 1000+ video-ekere òkè na saịtị na enyemaka nke otu click dị ka a smart download button ga-apụta.
• Ị nwere ike iduzi download YouTube ka mp3.
• Record ihuenyo mfe
• Record niile nkwanye videos.
• Ọ na-enye ohere mfe gụgharia nke media gị TV.
• Ọ na-abịa na inbuilt DLNA nkwado.
• Ọkụ na hazie gị DVD na free DVD menu ndebiri.
• Ọ nwere elu arụmọrụ video codec arụnyere n'ime ya na otú ọ pụrụ inye ugboro abụọ na mkpakọ nke video ka tụnyere H.264 ma n'otu oge, ọ na retains mma. Nke a n'ezie na-azọpụta a ukwuu nke ohere.
• Ị nwere ike nyefee videos ma Apple na Android mobiles na-enweghị mkpa maka eriri USB.
• Ọ na-abịa na mfe iji interface na-achọ nta ma ọ bụ mmezi mmụta.
Ugbu a na ị maara nke atụmatụ, ka anyị hụ ihe bụ isi nzọụkwụ a ga-agbaso maka n'ezie converting M4V video ka iMovie usoro.
Nzọụkwụ 1: launching
Ihe mbụ na-eme bụ iji ibudata ọhụrụ version nke Wondershare video Ntụgharị kacha. Ozugbo i ebudatara, jide n'aka na-wụnye ya na gị usoro site na isoro ntuziaka. Mgbe nke ahụ na-mere, pịa igba egbe na-emeghe interface.
Nzọụkwụ 2. Importing M4V
Nzọụkwụ ọzọ bụ mbubata M4V nkiri nke gị mkpa mbubata ka iMovie na Wondershare video Ntụgharị kacha. Iji mbubata video, ị pụrụ ịgbaso a dị mfe nzọụkwụ.
• Pịa na mbubata bọtịnụ na ị ga-ahụ a ọhụrụ window mmapụta elu.
• Ịnyagharịa na nchekwa nke gị nhọrọ na họrọ video ị chọrọ bulite on iMovie
• Alternately, ị nwekwara ike ịhọrọ ịdọrọ na dobe gị mgbasa ozi faịlụ na na onye ọrụ interface kwa.
Nzọụkwụ 3. Ịhọrọ mmepụta format
• Na na ala panel, ị ga-ahụ a format akara ngosi.
• Pịa na na iji hụ dum mmepụta panel.
• Ị ga-ahụ ọtụtụ nke dị iche iche formats maka mmepụta faịlụ.
• Họrọ a format nke bụ dakọtara na iMovie. Ọ pụrụ ịbụ MOV, MP4 dị ka mma.
• Alternately, ị nwekwara ike ịhọrọ ahazi presets nke bụ ugbu a n'ihi na iMovie. A na-enyere na-arụpụta ihe kasị mma.
Nzọụkwụ 4. tọghata faịlụ
• Kpebie mmepụta format, i kwesịrị see tọghatara bọtịnụ.
• The button bụ ugbu na ala n'aka nri akụkụ nke ihuenyo.
• Chere maka akakabarede wuchaa.
Nzọụkwụ 5. Import faịlụ ka iMovie
Iji ịkpali video ka iMovie, pịa na faịlụ taabụ ke n'elu. N'okpuru faịlụ, ị ga-enwe ibubata nhọrọ. Hover mbubata wee pịa on 'nkiri mbubata video faịlụ ka imovie' na mbubata usoro ga-eme.
Ndị a bụ ndị dị mfe nzọụkwụ ga-agbaso. Ị nwere ike iji anya nke uche ha na-esonụ screenshot.
Ya mere otu M4V video faịlụ-apụghị dị ka imovie?
iMovie bụ ọkpụkpọ maka Mac na Apple ngwaọrụ. Ọ na-adịghị nwere codec na-akwado a dịgasị iche iche nke dị iche iche faịlụ formats. Mgbe iMovie adịghị abịa na ụfọdụ ndị kasị mma atụmatụ na pụrụ inyere gị aka edezi fie, otu n'ime ya bụ isi constraints bụ na ọ na-enye ohere nanị ole na ole formats.
M4V format akwadoghi iMovie na ọ bụrụ na ị na-achọ mbubata ya, ị ga-mkpa mbụ nweta ya ghọrọ ka a kwesịrị ekwesị Ọkpụkpọ na mgbe ahụ, ị ​​nwere ike igwu ya na iMovie. iMovie ugbu a na-akwado nnọọ na-ewu ewu formats dị ka MOV, MP4 na na.
> Resource> iMovie> Olee mbubata M4V ka imovie